ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောလက်ရှိအခြေအနေ (ရုပ်/သံ) ~ Rohingya Blogger
ယနေ့ဖြစ်ပေါ်နေသော ရခိုင်ပြည်၏ လက်ရှိအခြေအနေကို လေ့လာပါက ပြည်တွင်းမီဒီယာ တိုင်းအားလုံး လိုလိုမှာ ဘာသာရေးခွဲခြားမှု၊ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဖြင့် ဖေါ်ပြရေးသားနေသည်ကို တဘက်သတ်တွေ့ ရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းတွင် နေထိုင်ကြသော လူမျိုးများဖြစ်သည့် ရိုဟင်ဂျာများကို လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်ရန် အာဏာပိုင်များက ရခိုင်လူမျိုးများနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။
မီဒီယာများ၏ဖေါ်ပြချက်များမှာ သူတို့အခေါ် ဘင်္ဂါလီကုလားများကသာ ရွာကိုမီးရှို့ခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ လုယက်ခြင်း များပြုလုပ်နေသည်ဟု အမြဲလိုလိုဓါတ်ပုံနှင့်တကွတွေ့မြင်ရပါမည်။
ယခုဗွီဒီ ယိုကို ကြည့်ရှုပါက အစိုးရလုံထိန်းတပ်နှင့် ရခိုင်အမျိုးသားတို့ ပူးပေါင်းကြံစည်နေ သည်ကို တွေ့ရှိရ မည်ဖြစ်ပါသည်။
‘ မြန်မာ တွေအားလုံးအတွက် ဝမ်းသာ စရာ သတင်းလေး တစ်ပုဒ် ပါ.....
ဘယ်သတင်းဌာ နက မှ တက်တဲ့ သတင်းတော့ မဟုတ်ဘူး အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ ကိုယ့်ဘာ သာ ကို စိတ်ကူးနဲ့ လျှောက်ရေးထားတာလဲ မဟုတ်ဘူး မောင်းတောက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ အဆက် အသွယ် ရပီ ကျန်တဲ့သူတွေလဲ ကျွန်တော့လို ဝမ်းသာစေချင်တာနဲ့ တင်ပေးလိုက်တာပါ.......
နစက က မနေ့ညကနေ မနက်ထိ သတ်လိုက်တာ ကုလား အားလုံးပေါင်း
.... ၁၅၀ လောက် ဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်အမျိုးသမီးတွေ တောင် ဓါးကိုင်ပီတော့ ကုလားကိုလည်လှီး သတ်ချင်နေ တယ်လို့ ကြားပါတယ်
Anonymous10 June 2012 02:13Myanmar Rohingya minority needs emergency protection helpYour Excellency,Rohingya case has been an international issue since 1942, after 1962, it became worse and worse. Now, when Government needs to change toward democracy, Rakhines whose ideology is based on Fascism called Rakhine Aryan , they have been killing Rohingyas violently ,world’s largest genocide. The Rohingyas’ lives in the whole Arakan state are now in danger, recently more than 200 people were killed , government cut out communication, we can not contact these areas. Rakhine uses DVB burmese broadcasting to implement their Neo-Racists and Neo-Fascist agenda. Rakhines fascists killing Rohingyas, burning their houses, looting their properties. Could you please save Rohingya people for the sake of humanity? Could you please give the Rohingya people protection? On behalf of Rohingya people, we beg and appeal to you to give Rohingya people security.ReplyDeleteAnonymous13 June 2012 16:30သတိထားကြဟေ့ သူတို့လှည့်ကွက်ထဲကိုမ၀င်စေနဲ့ ဒီကောင်တွေကမင်းတို့အဲ့လို့တမင်သက်သက်ေ၇းအောင်လုပ်နေတာ အဲ့ဒါမှလူးမျိူးေ၇းမုန်းတီးမူတွေလက်စားချေမုတွေ၇ှိနေဆိုတာသိအောင်လုပ်နေတာမေ၇းကြနဲ့ အမှန်ကိုလူတိုင်းသိတယ်ReplyDeleteAdd commentLoad more...